Zvose zviripo Counter-strike 1.6 uye Half-Life mutambo cvar list.
Iwe uchadzidza chimwe nechimwe cvar kuraira zvinoreva nokuti thezvino zvakawanda cvar marongero e counter strike 1.6 mutambo, isu tichasuma uye kukubatsira kuti unzwisise kuti chii.
izvi CS 1.6 cvar marongero mazita inogona kukubatsira kuvandudza kunaka kwekupfura kwako uye mutambo wacho pachawo. Zvirongwa zvakanyatsosarudzwa zvinokubatsira iwe kuve nemukana pane vanokupikisa zvakare.
CVar zita tsananguro
allow_spectator Inobvumira vatambi kuti vabatane sevaoni.
ati_npatch Inogonesa ATI TRUform tekinoroji, izvo zvinozoguma nemhando yepamusoro mhando asi yakaderera kuita.
ati_subdiv Iyi iATI TRUform level, iyo yaunokwira kumusoro (ine ati_npatch yakaiswa kune 1), iyo yakawanda mapolygoni anowedzerwa kune iwo modhi kuti atsvedzerere kunze.
bgmbuffer Inoseta ndangariro yakagoverwa yeCD/MP3 mimhanzi mumakilobytes.
bgmvolume Kana yakaremara, inombomira odhiyo yazvino iri kuridzwa ne "mp3" kana "cd" kuraira. Kuti urege kumira, ingogonesa zvakare.
ruvara rwepasi Inoisa iyo yepasi ruvara rweHalf-Life modhi yako inoonekwa nevamwe.
kupenya Inoisa kukosha kwekupenya.
cam_command Ita kuti munhu wechitatu aone. Izvi zvakafanana nemurairo we "munhu wechitatu". HL haidi sv_cheats 1 kuti ishande.
cam_idealdist Munhu wechitatu kamera kureba. Ona cam_command.
cam_idealpitch Yechitatu munhu kamera nhanho. Ona cam_command.
cam_idealaw Kamera yemunhu wechitatu yaw. Ona cam_command.
cam_snapto Kana ikagoneswa, maonero ako anozofamba nekumhanya kwakafanana nemafambiro ako, kwete kukurumidza kupfuura mafambiro ako. Munhu wechitatu chete. Ona cam_command.
Chase_active Uyu ndiwo maonero emunhu wechitatu sezvakangoita cam_command 3, kunze kwekuti inongoshanda mumutambi mumwe chete, uye kana iwe uchifambisa mbeva yako, zvinoita sekunge uri kuswededza pedyo pane yako mutambi modhi.
Chase_back Inoisa kuti kamera iri kure zvakadii kumashure kwako kana Chase_active iri 1.
Chase_right Inogadzirisa kuti kamera iri kure zvakadini kurudyi rwako apo Chase_active yakagadzirirwa ku 1. Kana iwe uchida kuita kamera kuruboshwe rwako, shandisa maitiro asina kunaka.
Chase_up Inoisa kuti kamera iri papi pamusoro pako kana Chase_active iri 1.
client port Inoseta chiteshi icho mutengi anobatanidza kune sevha.
hwindo rewachi Yakagadzirirwa kurwisa speedhacks inoshandiswa mumutambo. Iko kukosha kweiyo cvar ndeye "0.5". Sezvo kukosha kunodzikira (0.3, 0.1, 0.01, nezvimwewo), modem mutengi mitambo inofanirwa kunzwa kutsvinya. Kurongeka kwehwindo rewachi hakukanganisi sevha. Ikozvino izvi hazvivharise maspeedhacks, zvinongoita kuti speedhacker iwire kumashure kana speedhacking.
cl_allowdownload Bvumira kurodha mamepu, mamodheru, manzwi, sprites, maumbirwo kana uchibatanidza kune server.
cl_allowupload Bvumira tsika yako yekupfapfaidza kuti itakurwe kana yabatanidzwa kune server.
cl_anglespeedkey Inotara reshiyo yekutendeuka kumhanya kuenda +kuruboshwe/+kurudyi kana uchifamba (+kumhanya). cl_yawspeed * cl_anglespeedkey = tendeuka kumhanya kana uchifamba. Chiyero chekutendeuka chinoramba chiripo pakufamba i140.7 (210 * 0.67 = 140.7).
cl_backspeed Seta kumhanya neshure (+kumashure) kiyi. Izvi zvinogumira kune sv_maxspeed backend. Uye muCS inoganhurwa nekumhanya kwechombo. Izvi zvinofanirwa kuenzana ne cl_forward uye cl_sidespeed, zvikasadaro iwe uchava nematambudziko panguva imwe chete kunonoka mberi uye kuruboshwe, semuenzaniso.
cl_bob Inoisa huwandu hunoita kuti maonero anozununguka kana mutambi achimhanya.
cl_bobcycle Inotara kuti kangani kutarisa kwemutambi kunofamba achimhanya. Ini ndingakurudzira kusiya ichi sechisina kurongeka sezvo ichikanganisa maoko ako mushure mekuvandudzwa (zvakaita sekuvayera). Isati yagadziridzwa iyi, yakakanganisa crosshair yako. Haina mhedzisiro kana cl_bob iri 0.
cl_bobup Inoisa huwandu hwenguva iyo mutambi anobhutsu achimhanya. Haina mhedzisiro kana cl_bob iri 0.
cl_chasedist Iyo inoshandura kuti yakawanda sei kamera inoburitsa kunze iwe wakafa.
cl_clock reset Kana wachi yemutengi ikatsauka kubva pasevha nekupfuura cl_clockreset, tinongoigadzirisa kuti ishandise sevha uye togadzikazve delta ku0 - izvi zvinowanzoitika kana sevha yapinda mukati uye pamwe kana paine kurasika kwakawanda kwepaketi.
cl_cmdbackup Zvakare, nebatch yega yega yemirairo (cl_cmdrate), tinotumira zvakare mashoma ekupedzisira ekupedzisira ekufambisa mirairo (muchiitiko chekurasikirwa kwepaketi) kuitira kuti tirambe tichimhanya zvakanaka takatarisana nediki network. Nokusingaperi, nhamba yemirairo ye "backup" yatinotumira ndeye 2, asi unogona kuchinja nhamba iyi nekuisa cl_cmdbackup kune imwe nhamba. Iwe unogona kutumira anopfuura 8 mirairo yekuchengetedza uye iwe unofanirwa kuyeuka kuti kutumira mirairo yekuchengetedza kuchawedzera inobuda bandwidth kushandiswa.
cl_cmdrate Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yemirairo yepakiti yaunotumira kune server pasekondi. Nekusagadzikana, anosvika makumi matatu ekuraira mapaketi pasekondi anotumirwa kune server. Kana iwe uchimhanya zvinodarika makumi matatu mafuremu pasekondi, pachave nemirairo yakawanda yakaiswa mune mamwe mapaketi. Iwe unogona kushandura chiyero painotumirwa mapaketi ekuraira kune server nekuisa iyo cl_cmdrate kusiyanisa.
cl_corpsestay Nguva mumasekonzi zvitunha zvisati zvanyangarika pasi.
cl_crosshair_color Inotsanangura ruvara rwe crosshair muRGB, kukosha kunofanirwa kuvharirwa mumakotesheni maviri.
cl_crosshair_size Inotsanangura saizi ye crosshair. Zvinogoneka kukosha ndeizvi: 0 kana otomatiki / 1 kana diki / 2 kana yepakati / 3 kana yakakura.
cl_crosshair_translucent Inosanganisira translucent crosshair.
cl_dlmax Cl_dlmax inotsanangura "chunk" saizi yezvidimbu zvevatambi decal, nezvimwewo zvinoiswa panguva yemutambo. Yakasungirirwa kusvika ku16 kusvika ku1024 bytes. Inobatsira kuyedza uye kudzikamisa kushandiswa kwedecal kune bandwidth - yakawedzera pfungwa apo munhu wese aishandisa 14.4kbps modem.
cl_download_ingame Inokutendera iwe kurodha tsika mutambi akapfapfaidza panguva yemutambo.
cl_dynamiccrosshair Inogonesa dynamic crosshair kana wakagwara/kusvetuka…
cl_fixtimerate Cl_fixtimerate inhamba ye ms per furemu kugadzirisa wachi drift. Nekuti sevha inotumira timestamps mupaketi yega yega, asi isu tinongoverenga ruzivo rwenetiweki kamwe chete pafuremu, hatidi kungo "tora" wachi yeseva, saka isu tinoishandisa sechinangwa uye "kururamisa" nefixtimerate (kana delta haisi ichave yakakura uye isu tichasunga mutengi kune server wachi).
cl_fog_b Inoisa kukosha kweruvara rwebhuruu rwemhute. Fog inogona kugoneswa ne gl_fog 1. Iyi CVar yakavanzwa nekusarudzika uye iwe unofanirwa kuwedzera -dev kune mutambo wekuraira mutsara kuti cvar iyi ishande. Mepu yepamutemo ine mhute ndeye de_inferno_cz. Vanyori vemepu vanogona kuwedzera mhute kumamepu avo vachishandisa env_fog chinhu, chinogadzika ichi CVar.
cl_fog_density Inogadzirisa mhute density. Fog inogona kugoneswa ne gl_fog 1. Iyi CVar yakavanzwa nekusarudzika uye iwe unofanirwa kuwedzera -dev kune mutambo wekuraira mutsara kuti cvar iyi ishande. Mepu yepamutemo ine mhute ndeye de_inferno_cz. Vanyori vemepu vanogona kuwedzera mhute kumamepu avo vachishandisa env_fog chinhu, chinogadzika ichi CVar. Kukosha kwakanaka i0.0003.
cl_fog_g Inoisa kukosha kweruvara rwegirinhi rwehute. Fog inogona kugoneswa ne gl_fog 1. Iyi CVar yakavanzwa nekusarudzika uye iwe unofanirwa kuwedzera -dev kune mutambo wekuraira mutsara kuti cvar iyi ishande. Mepu yepamutemo ine mhute ndeye de_inferno_cz. Vanyori vemepu vanogona kuwedzera mhute kumamepu avo vachishandisa env_fog chinhu, chinogadzika ichi CVar.
cl_fog_r Inoisa kukosha kweruvara rutsvuku rwemhute. Fog inogona kugoneswa ne gl_fog 1. Iyi CVar yakavanzwa nekusarudzika uye iwe unofanirwa kuwedzera -dev kune mutambo wekuraira mutsara kuti cvar iyi ishande. Mepu yepamutemo ine mhute ndeye de_inferno_cz. Vanyori vemepu vanogona kuwedzera mhute kumamepu avo vachishandisa env_fog chinhu, chinogadzika ichi CVar.
cl_forwardspeed Inoseta kumhanya uchishandisa "mberi" kiyi (+mberi). Izvi zvinogumira kune sv_maxspeed backend. Uye muCS inoganhurwa nekumhanya kwechombo. Inofanira kuenzana ne cl_backspeed uye cl_sidespeed, kana zvisina kudaro iwe uchava nematambudziko, somuenzaniso, kubata mberi uye kuruboshwe panguva imwe chete.
cl_gaitestimation Cl_gaitestimation inoshandisa imwe nzira yekuverenga kumhanya kwevamwe vatambi, iyo inoshandiswa kudzora iwo animation yemuviri wavo wepasi (makumbo). Zvisinei, cs 1.6 nesimba rinoisanganisira uye shanduko inofuratirwa.
cl_gg Kana yagoneswa, kana uchiona demo ine playdemo kana viewdemo, inomhanyisa demo mubenchmarking mode, kubuda mumutambo, uye kuchengetedza zvabuda mufps.txt faira. Izvi zvakafanana nekumhanyisa demo negg "demoname".
cl_himodels Inosanganisira mhando dzemhando yepamusoro. Izvi zvinoshanda chete muHalf-Life.
cl_idealpitchscale Izvi zvaishandiswa nehurongwa (kunyanya kushandiswa kwemajoystick) kugadzirisa kona yemaziso kana uchifamba uchikwira / pasi. Izvi zvinoita sekunge zvakashandiswa "kuyera" kukurumidza sei kukwirira kwakasvika kune "yakanaka" nzwi rekurereka. Izvi zvinoshanda kana lookpring ikagoneswa (inofanirwa kudzima kubhurawuza negonzo) uye kana kubhurawuza neiyo joystick kunogoneswa. Kukosha kunoratidza kuti madhigirii mangani maonero anochinja kana uchifamba uchikwira/pasi pamateru.
cl_lc Izvi zvinonzi "server-side hit calculation uye lag compensation". Izvi zvinongoshanda chete kana sevha ichibvumira kubhadharwa (sv_unlag 1) uye kana mutambi wekupfura akakumbira kubhadharwa (cl_lc 1 - cherechedza kuti mutambi anofanirawo kufanotaura kuvhurwa kwechombo kudivi remutengi zvakare, zvikasadaro cl_lc inofuratirwa). Usachinje. Onawo cl_lw.
cl_logocolor Inotsanangura ruvara rwepfapfaidzo yako: #Valve_Blue, #Valve_Brown, #Valve_Dkgray, #Valve_Ltblue, #Valve_Ltgray, #Valve_Green, #Valve_Orange, #Valve_Red, #Valve_Yellow
cl_logofile Inotara kuti ndeipi pfapfaidzo yaunoda kushandisa pakati pezvinotevera: 8ball1, andre, camp1, chick1, chuckskull, devl1, gun1, lambda, Skull, smiley, splatt, tiki, v_1.
cl_lw Izvi zvinonzi "client-side weapon kupfura kufanotaura". Izvi zvinoreva pakarepo seti yemhedzisiro inoitika kana bhatani remoto radzvanywa. Zvese izvi zvinokonzeresa zvinoitwa kudivi remutengi kana mutengi wepadivi chombo kupfura fungidziro yakagoneswa (cl_lw iri 1). Mhedzisiro zvinosanganisira: kuburitsa animation yekupfurwa kwechombo, kuratidza chero mhezi yemuromo, kugadzira chero chinhu chakaraswa, dhizaini nemabara panzvimbo yarohwa pamadziro epalevel, kukonzeresa ruzha rwechombo chiri kuridzwa, zvichingodaro. Zvisinei, kutsunga chaiko pfuti yakadzingwa (kungoita zvombo zvine hit scan) kune mumwe mutambi izvozvi uye zvagara zvichiitwa paserver. Kana izvi zvikaremara, kunonoka muripo kunovharwawo. Ona cl_lc.
cl_minmodels Gonesa kuratidza mamodheru mashoma chete: leet.mdl, gign.mdl uye vip.mdl, zvichiita kuti zvigone kuvandudza kushanda.
cl_movespeedkey Sipidhi yaunofambisa kana +speed ichishanda.
cl_needinstanced Kugonesa iyi sarudzo kucharatidza rumwe ruzivo nezve akaremerwa modhi (mamodheru ezvombo) mukoni. Iwe unoda kuvandudza 1 kuti uone ruzivo. Uye iwe unoda sv_instancedbaseline 1 padivi reseva. (Yatova 1 nekusingaperi)
cl_nosmooth Inoona kana zvikanganiso zvekufungidzira zvichagadziriswa zvakanaka panguva ye cl_smoothtime. Kana yaiswa ku1, kufanotaura kukanganisa kutsvedza kunovharwa (zvakafanana ne cl_smootime 0).
cl_observer crosshair Izvi zvinobatidza macrosshairs muFree Look viewer mode. Iyo bhagi, inoshanda chete kana iwe ukafa uye kamera yakaiswa kune freeview, mushure mekushandura mucherechedzo modhi haishande kunze kwekunge muchikamu chinotevera kana iwe ukafa uye uri mu freeview zvakare.
cl_pitchdown Inoisa iyo yakakura yekuona kona yekutarisa pasi. Izvi zvakakiyiwa uye hazvigone kuchinjwa muCS.
cl_pitchspeed Uku ndiko kukurumidza kwaunoita loop yako yekumusoro/pasi nemirairo + yekutarisa/+ yekutarisa pasi.
cl_pitchup Inoisa iyo yakanyanya kuona kona yekutarisa kumusoro. Izvi zvakakiyiwa uye hazvigone kuchinjwa muCS.
cl_pmanstats Iyo inoratidza ruzivo rwechidimbu pane yako skrini. Zvicherwa magirinedhi eutsi (pamwe pane zvimwe zvinhu, asi ini handisati ndaona chimwe chinhu chingashandura iyi particle counter). "Nhamba yezvimedu" inhamba yezvimedu pamepu parizvino. ” ndiyo nhamba yezvikamu zvinoratidzwa pachiratidziri chako. "CMiniMem Yemahara" ndiyo huwandu hwekuyeuka huripo hwehutsi.
cl_radartype Inogonesa opaque (opaque) radar.
cl_rate Iyi ndiyo nhamba yemabyte pasekondi inotumirwa nemutengi kune server. Cherechedza. Iwo murairo asi unoshanda se cvar kunze kwekuti dzimwe nguva haushande kana ukaedza kuuisa mucfg yako.
cl_resend Iko kunonoka, mumasekonzi, mutengi asati atumirazve kuedza kwekubatanidza. Apa ndipo paunenge uine matambudziko ekubatanidza kune sevha uye unoona: "Kuedzazve kubatana kune server #1". Uye haina chekuita netiweki kodhi, sezvaiita vanhu pakutanga.
cl_rudyi Kana yaiswa ku -1, chombo chako chinenge chiri muruoko rwako rweruboshwe uye banga rako kurudyi rwako. Kana yaiswa 0, zvombo zvese zviri muruboshwe. Kana yaiswa ku1, zvombo zvese zviri muruoko rwerudyi.
cl_shadows Gonesa mimvuri yemutambi (diki dema denderedzwa), dzima kuita zvirinani.
cl_showerror Ratidza kukanganisa kwekufungidzira pachiratidziri.
cl_showevents Inogonesa kuratidzwa kwezviitiko zvakaita sekupfura chombo, zviitiko zvese zvakanyorwa mu cstrike/zviitiko/.
cl_showfps Inoratidza yako FPS yazvino mukona yekuruboshwe yechidzitiro.
cl_showmessages Donhedza network traffic kune iyo console. Unoda mugadziri wekushanda 1.
cl_shownet 0 Usaratidze chero ruzivo. 1 Dhinda saizi yeizvino iri kuuya packet mumabhaiti. 2 Ratidza ruzivo nezve ikozvino iri kuuya packet uye saizi yayo.
cl_sidespeed Seta kumhanya uchishandisa kuruboshwe uye kurudyi makiyi ekufambisa (+moveleft uye +moveright). Izvi zvinogumira kune sv_maxspeed backend. Uye muCS inoganhurwa nekumhanya kwechombo. Izvi zvinofanirwa kuenzana ne cl_backspeed uye cl_forwardpeed, zvikasadaro iwe uchave nedambudziko rekubata kumberi nekusiya panguva imwe chete, semuenzaniso.
cl_slist Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yemasekonzi ekumirira mhinduro paunenge uchipingudza LAN ”slist” . Mhinduro dzakanonoka hadzina kufuratirwa.
cl_smoothtime Inotsanangura huwandu hwenguva iyo iyo inomiririra ichave yakanyatso kurongeka mushure mekufembera kukanganisa. Kana tikaseta cl_smoothtime kusvika 0 (kana cl_nosmooth kusvika 1), kududzira kwedu hakuzo "kupfava" kana kugadziriswa uye tichaona nzvimbo dzevatambi chaidzo. Ndokumbira utarise kuti izvi zvinokonzeresa kusvetuka mukufamba kwevatambi, asi ivo vanenge vari chokwadi.
cl_solid_players Kunyangwe iyo mafambiro ekufanotaura mafambiro anofanirwa kuona vamwe vatambi sevakasimba.
cl_timeout Paunenge usingaite, mushure memasekondi mangani server inokubvisa. Izvi zvakare zvinodzorwa ne sv_timeout (server side)
cl_updaterate Iyi ndiyo nhamba yezvigadziriso pasekondi imwe yauri kukumbira kubva kune server.
cl_upspeed Seta kumhanya nemakiyi ekufambisa ekumusoro/pasi (+moveup/+moveleft). Izvi zvinogumira kune sv_maxspeed kumashure kumagumo. Uye muCS inoganhurwa nekumhanya kwechombo.
cl_vsmoothing Izvi zvinodaidzwa kuti View Smoothing, uye zvinosanganisira kupindirana pakati pekuona mavheti. Iyo inotsvedza / inodudzira mabviro uye ekuona makona kana uchikwira pazvitima / mapuratifomu. 0.05 inofanira kunge yakanaka (kana iwe uri pamusoro pe20fps) uye 0 inoidzima saka inofanira kuwedzera fps yako.
cl_waterdist Inotsiva maonero ari pamusoro pemvura.
cl_weaponlistfix Izvi zvaifanira kugadzirisa bhagi muHL1 sosi kodhi ine chekuita neWeaponList tsika meseji - iyo meseji yaizongofuratirwa kana iyi yakaiswa.
cl_weather Inogonesa mvura pa de_aztec, 1 inokonzeresa madonhwe mashoma emvura, 2 ichawedzera huwandu hwayo, 3 ichakonzera kunaya kwemvura. Inoidzima kuti ivandudze kushanda.
cl_yawspeed Inotsanangura mwero wekutendeuka ne+kuruboshwe uye +kurudyi.
chivakashure Izvi hazvishande paSteam, asi paWon (pre-Steam system) kana wanga uine iyi CVar yakaiswa ku “0” waisakwanisa kuvhura koni.
neruvara Inoseta ruvara rwemameseji ekutaura. muRGB. MuWon (pre-Steam system) yakashandiswawo kushandura iyo console mavara mavara.
con_notifytime Huwandu hwenguva, mumasekondi, iwo mameseji ekuvandudza anoramba ari kumusoro kuruboshwe rwekona asati anyangarika kubva pachiratidziri.
hoko yehuku Izvi zvaifanirwa kugonesa co-op modhi muKudengenyeka. Izvi hazvishande muHL1 nekuti hapana NO co-op mod (zvakare haishande muCS nekuti CS mutambo wevazhinji).
crosshair Inogonesa dot dzvuku pakati peawp/scout/g3sg1/sg550 sikkope.
c_maxdistance Iyi ndiyo nhanho yepamusoro yekamera yemunhu wechitatu (ona cam_command) uchishandisa +camdistance (cmd).
c_maxpitch Iyi ndiyo yepamusoro 3rd munhu kamera pitch (ona cam_command) paunenge uchishandisa +cammousemove (cmd).
c_maxyaw Iyi ndiyo yepamusoro 3rd munhu kamera yakarereka (ona cam_command) paunenge uchishandisa iyo +cammousemove (cmd) kuraira.
c_mindistance Uhwu ndihwo hudiki hwekamera yemunhu wechitatu (ona cam_command) uchishandisa +camdistance (cmd).
c_minyaw Uku ndiko kutsauswa kwekamera yemunhu wechitatu (ona cam_command) paunenge uchishandisa +cammousemove (cmd).
kurwira kusvika pakufa Iyo inosarudza kana sevha yakawanda-mushandisi (1) kana imwe-mushandisi (0). Izvi zvinoiswa otomatiki ku1 paunotanga yekuteerera kana yakatsaurirwa sevha. Inongogara pa0 kana ukatanga mepu nekadhi "mepu zita" kana kuridza HL single player.
decalfrequency Inoisa frequency iyo vatambi vanogona kupfapfaidza marogo avo. Huwandu huri mumasekonzi, 0 zvinoreva kuti hapana kunonoka (pfapfaidza nekukurumidza sezvinobvira).
default_fov Inoisa nzvimbo yekuona muHalf-Life. MuCS, shanduko inongoitika kana iwe uchibvisa muviri wako mucherechedzo modhi mushure mekufa. Zvakare, zvinokanganisa kunzwa kwako kana ukaedza kuzvigadzirisa. MuHafu-Hupenyu, izvi zvinogona kushandiswa kuwana "zoom" mhedzisiro kunyangwe pane zvombo zvisina chiyero.
yokuvaka Inogonesa developer mode. Developer mode inogona kushandiswa kuratidza ruzivo pachiratidziro uye kuburitsa ruzivo rwakawedzerwa kune console. Mugadziri 2 anopa ruzivo rwakadzama kupfuura mugadziri 1.
dev_overview Inoratidza mepu yekutarisisa yakagadzirwa nemutambo. Inoshandiswa kune vanodhirowa macartograph kuti vatore mufananidzo.
chaipoipo Inotsanangura ambient/direct lighting scaling pamhando dzestudio.
inoratidza runyoro rwemanzwi Kana yaiswa, izvi zvinoratidza rondedzero yeAI inonzwika pane koni (chete nemugadziri 2).
d_mipcap Sets the maximum quality for all textures, pedyo kana kure.0 High texture details.1 Medium texture details.2 Low texture details.3 Minimum texture details.
d_mipscale Iyo inoisa iyo yakanyanya scalable mhando yezvimiro zviri kure. 0 Tsanangudzo yechinhu chakazara 1 Zvimwe zvinhu 2 Tsanangudzo yechinhu chiri pakati nepakati 3 Tsanangudzo yechinhu chakaderera Uye ndinofunga unogona kuenda ku3.
d_spriteskip Inopa kukurumidza kupa kwe sprites. Ichasvetuka kupa ese N scan mitsara.
kumucheto friction Izvi zvinoshandiswa kuwedzera kuderera kana uchisvetuka kubva kumucheto. Kana uchisvetuka kubva papuratifomu iri 70 mayunitsi pamusoro pevhu, kumucheto kukweshera kunowedzerwa zvakanyanya. Kana yaiswa pamusoro, simba rinokukwevera pasi rinokura. (Gravity neimwe nzira)
ex_interp ex_interp inoseta huwandu hwenguva (mumasekondi) kupindirana pakati pega yega inoteedzana update (cl_updaterate). Isa iyi shanduko ku0 uye hapana chimwe chinhu. Counter-Strike ichaisa otomatiki ex_interp kusvika 1/cl_updaterate (kureva kuti koni yako ichati "ex_interp inowedzerwa nechisimba kusvika xx ms"). Izvi zvinodaro nekuti nguva iri pakati pepakiti imwe neimwe i1/(nhamba yezvigadziriso pasekondi), saka ndiyo nguva yakareba yaunoda kuti mutengi wako adudzire.
feyklag Inotevedzera kunonoka kana kukosha kwakura kupfuura 0. Kukwirisa ukoshi, ndiko kunowedzera kunonoka.
kurasikirwa kwenhema Inotevedzera kubiridzira kana kukosha kuri pamusoro pe 0. Iyo yakakwirira kukosha, iyo yakakura kubiridzira, kune iyi sv_cheats inofanira kugoneswa.
fastsprites Inosarudza kunaka kwehutsi hwehutsi, 0 ndiyo yakaipisisa, 2 ndiyo yakanakisisa. Isa hutsika hwakaderera hwekuita zviri nani.
fps_max Seta huwandu hwemafuremu pasekondi. Iwe unogona chete kuva neanopfuura zana kana mugadziri ari 100 (akagoneswa).
fps_modem Iyi ndiyo yekare CVar fps_max yewebhu. Siya kukosha uku pa0 uye shandisa fps_max.
fs_lazy_precache Kazhinji, switch iyi yakavharwa, iyo inobvumira mutambo kurodha mafaera ese anodiwa eiyo mepu usati watanga mutambo. Kana iyi switch ikagoneswa, mutambo hauzofanorodha mafaera panguva yekutanga mepu, pachinzvimbo, mafaera ekurira anongotakurwa chete paanenge achidiwa. Mafaera eruzha acharamba ari mundangariro mushure mekunge atakurwa kuti avandudze mashandiro emutambo nekusazorodha mafaera akafanana kubva kuhard drive pese panoshandiswa faira renzwi.
fs_perf_yambiro Inodzora kuti yambiro yekuenzanisa yakadhindwa here. Inoda mugadziri kuti ave 1 (On).
fs_precache_timings Perf printouts nezve ruzha uye modhi kurodha. Inoda mugadziri kuti ave 1 (On).
fs_startup_timings Inogadzirisa boka rezvisina maturo zvekoni nezve nguva paunotanga injini. Inoda mugadziri kuti ave 1 (On).
gamma Inoisa kukosha kwegamma.
gl_affinemodels Inoshandisa opengl maonero ekugadzirisa mazano: semuenzaniso: glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
gl_alphamin Izvi zvinotarisa kuti kusefa kwemavara nealpha masking (lattices, fenzi, magonhi echidzitiro) kunokanganisa sei kutaridzika kwemapendero. Pamhando dzakakwirira, zvinhu izvi (sezvipfigiso, fence, nezvimwewo) zvinotarisa "zvakaonda", pamutengo we1 zvinopera zvachose.
gl_clear Kana iwe ukagonesa gl_clear inobvisa iyo buffer yemavara. Izvi zvinotoreva kuti kana kamera ichikwanisa kuona mune isina chinhu, kungave nekuti kadhi riri kunze kweiyo clip ndege kana nekuda kweimwe mhando yehuori hwemepu. Izvi zvinowanzo shandiswa sechishandiso chekugadzirisa sezvo ruvara rwe gl_clear rwakatsvuka. Vagadziri vemapapu vanoishandisa kuti vaone kana paine zvinobuda mumamepu avo. Zvese zvinoita kunge zvichatsvuka muD3D, kunyangwe usiri kunze kwemepu.
gl_cull Inogonesa iyo opengl GL_CULL_FACE kuseta.
gl_d3dflip Iyi CVar inoshanda chete muD3D mode. Izvi zvinosanganisira reverse revering order. NenVidia Detonator 53.03 uye gl_d3dflip 0 unogona kuwana WH. Kana uine nyaya dzekusarira kwembeva muD3D (kazhinji kacho muchiutsi), unogona kuedza gl_d3dflip 1, izvi zvinoderedza kusakara kana kugadzirisa.
gl_dither 16-bit OpenGL rendering inogona kushandisa nzira ye-anti-aliasing umo kushaya kudzika kweruvara kwakavanzwa nekutenderedzwa nenzira dzakasiyana zvichienderana nepixel iri kupihwa. Kuiisa kuna 0 inogona kukurumidza kana kushoma kuvanza. Zvakare, izvi zvinogona kutaridzika zvakanyanya kunaka. Zvinoenderana nezvido zvemunhu. Zvinoita sekuti mu 32-bit mode haina kukanganisa madziro, denga chete.
gl_flipmatrix Uku ndiko kugadzirisa yako crosshair kana uri kushandisa 3dfx madhiraivha (akare magiraidhi makadhi eg: Voodoo, Voodoo2, Rush kana Banshee.) Pamwe mukati CS 1.6 haugone kana kushandisa 3dfx maseva sezvo pasina sarudzo senge mu1.5 kuti igone . Kana iwe ukashandisa izvi nevamwe vatyairi iwe unowana iyo AWP / Scout scope kukanganisa.
gl_fog Batidza/dzima mhute. Izvi zvakaitirwa CZ, kwete 1.6, asi inogona kushanda mu1.6. Izvi zvinoshanda chete mu de_inferno_cz. Asi neizvi unogona kuwana mepu yemuvara (kana kuti iite kuti ishande pamamepu ese): unofanirwa kuve -dev mune yekutanga sarudzo uye kuseta cl_fog_density ku1 + cl_fog_r/cl_fog_r/cl_fog_g (vanodzora ruvara).
gl_keeptjunctions Chengetedza mapoinzi emacollinear akawedzerwa neQCSG/QBSP kugadzirisa T-junctions. Kana ukaiisa ku 0 uchaona mitswe pakati pemamwe maumbirwo.
gl_lightholes Inodzora kana kuisa mwenje panzvimbo ine ” maburi ” (kwete chokwadi kana izvi zvichiri kushanda).
g_max_size Hukuru hwehukuru mumapikisesi umo mavara anoiswa. Hukoshi hunofanirwa kuita kuwanda kwegumi nematanhatu kudzivirira mavara machena kuti asaonekwe. Kana chimiro chakura kupfuura gl_max_size chinodimburwa kusvika pakukura uku, kana saizi iyi isiri kuwanda kwe16 inozove muchena. Kunyange zvazvo gl_max_size isina kukosha kwepamusoro, 16 ndiyo inonyanya kukosha kukosha kwe gl_max_size.
gl_monolights Gadzira imwe sosi yechiedza, isina mimvuri. (Uye zvakare inogona kunzi seFullBright). Kana girinedhi rikaputika munzvimbo kana kuti ukabatidza tochi, gamma yenzvimbo yacho inodzokera kune yakajairika.
gl_nobind Inoshandura kushandura mavara nealphanumeric characters. Yakaderedzwa, haishande mu1.6.
gl_nocolors Usasungirire zvakasiyana mavara mavara kune vatambi. Yakarambwa uye haina kutsigirwa.
g_overbright Saturated lighting. Inoita kuti kupenya kuve kwechisikigo uye kwechokwadi.
gl_palette_text Gonesa/dzima tsigiro yemavara akachekwa. Kana mutyairi weGL wauri kushandisa asingatsigire kuwedzera, hazvizoite mutsauko. Asi mamwe makadhi haatsigire wedzero zvakanaka uye tsigiro inofanirwa kuvharwa uchishandisa shanduko iyi.
gl_picmip Inoisa mhando yekupa - * nhamba yepamusoro inokurumidza asi yakaderera mhando. Usaise kupfuura 3 kana cs ichaparara.
gl_playermip Inoisa mhando yekupa yemhando. Haisi kutsigirwa.
gl_polyoffset Huwandu hwekugadzirisa hwekushandisa kune polygon mavara.
gl_reportjunctions Iyi cvar haina basa.
gl_round_down Uku ndiko kukwenenzverwa kwemavara kana kutenderera kwemavara. Kana maumbirwo achida kuchinjwa, anotenderedzwa kumusoro kana pasi zvichienderana nazvo. Kuiisa yakaderera INOFANIRA kuita kuti magadzirirwo awedzere kurongeka, uye nekuimisa yakakwira INOFANIRA kushatisa kunaka kwemavara. Ini ndinoti "ZVINOFANIRA" nekuti zvinogona kuenderana nekadhi remifananidzo. Iyo yakanyanya kukosha INOFANIRA kuva 5, asi zvakare izvi zvinogona kuenderana nekadhi yemifananidzo.
gl_spriteblend Akabatidza alpha musanganiswa wemasprites. Zvakafanana ne sprite rendering quality (gl_spriteblend 0 = yakashata), gore nezvimwe. (0 = ropa rakawanda)
gl_wateramp Inowedzera masaisai emvura (pamapu emvura, hongu). Iyi cvar inogona chete kugadziridzwa ne sv_wateramp (padivi reseva).
gl_wireframe gl_wireframe 1 inoita yekutanga nekuisa mitsetse inopenya pamucheto wega wega unodhonzwa neinjini kuratidza kuti inotsemuka sei. gl_wireframe 2 inoita zvimwe chete, asi mitsetse yainogadzira inogona kuvonekwa nepamadziro, ichikutendera kuti utaure kuti ndeipi chikamu chemepu chiri kudhirowa (kusanganisira dzimwe nzvimbo dzingasadhirowe!). gl_wireframe 1 yakanakira kuona zviso zvichiputsika nezvimwe. gl_wireframe 2 yakanakira kuona kana VIS blockers yako iri kushanda uye kumisa dzimwe nzvimbo kuti isaitwe. Izvi zvinoshandiswa nevanodhirowa mamepu kuti vaone zvakaverengerwa kuvandudza mashandiro emepu dzavo.
g_zmax Inoisa saizi yakakura yezbuffer. Iyi ndiyo nhambwe huru inooneka. Kuiisa kune 0 muD3D renderer inobvumidza iwe kuona kuburikidza nemadziro. Sezvo vanhu vaibiridzira pairi, VALVe yakawedzera dziviriro uye ikozvino cvar iyi inogona kungoshandurwa ne sv_zmax (padivi reseva).
gl_ztrick Hafu yeZ-buffer renji, asi isina kucheneswa (inochengeta kuzadza chiyero). Kugonesa kuseta uku kungakonzeresa kuti zvinhu zviri kure zvipenye. Kana iwe uchida mamwe mafuremu pasekondi, gonesa izvi.
chati urefu Inoisa hurefu hwe net_graph.
inzwi rayo Inochinja ruzha rwemhando yepamusoro.
host mepu Kana mepu ikagadziridzwa uchishandisa “mepu” rairo, iyi parameter inongoiswa kuzita remepu. Kune vakawanda, izvi zvinongogadzirirwa pakutanga sevha, nokuti mepu yekutanga inotangwa ne "mepu" yekuraira, asi pakuchinja mamepu, "changelevel" inoshandiswa.
hostname Seta zita reseva.
host port Sets port kuti ishandiswe kune server yako. Iyi CVar ine maitiro akafanana ne "port" CVar, kunze kwekuti kana "hostport" isiri 0, inoshandiswa pachinzvimbo che "port".
host_framerate Izvi zvinoyera wachi, asi mu singleplayer kana panguva yekutamba yedemo (inogona kushandiswa kumhanyisa kumberi).
host_killtime Inoseta kunonoka isati yauraya sevha.
host_profile Inoratidza nhamba yevatengi vakabatana uye yavo network latency.
host_speeds Inoratidza inotambira FPS, network latency, chiyero chekutamisa, chiyero chekupa, uye kuverenga kwechinhu pamepu.
hpk_maxsize Inotsanangura huwandu hwehukuru hwecustom.hpk faira mu cstrike folda yako, iyo custom.hpk faira inoshandiswa kuchengeta marogo evamwe vatambi. Kukosha kwayo kunotsanangurwa muma megabytes, kukosha kwe0 kunoreva kuti hapana saizi yakakura.
hud_capturemouse Kana yakaremara, hapana mbeva cursor mune yekuraira menyu. Izvi hazvishande mukati CS 1.6 uye DoD 1.3 nekuti menyu yekuraira haichatsigire kusungirirwa kwenhamba. Asi ichiri kushanda muHL, TFC uye mamwe ma mods.
hud_centerid Inoshandura kuratidzwa kwemazita evatambi mukona yezasi yekuruboshwe kana pakati pechidzitiro. Zita remutambi rinoratidzwa kana wakananga kune mumwe mutambi.
hud_classautokill Kana ikagoneswa, zviuraye wega mushure mekusarudza kirasi yemutambi mutsva muTFC.
hud_deathnotice_time Inoseta nhamba yemasekonzi ayo zviziviso zverufu zvinoratidzwa.
hud_draw Inogonesa kuita kweHUD.
hud_drawhistory_time Inoisa huwandu hwemasekondi ayo maHUD icons anoratidzwa. Semuenzaniso, tenga zvidhori.
hud_fastswitch Inoshandura kuchinja kwezvombo nokukurumidza. Kana yagoneswa, chombo chinochinja nekukasika kana kiyi yenhamba yadzvinyirirwa (inofanira kusungwa kumirairo yeslotX). Izvi hazvina zvazvinoita kana iwe uchipfuura nepakati pechombo chako (uchishandisa invprev uye invnext).
hud_saytext Inosanganisira in-game chat (yakafanana nehud_saytext_internal yeCS, CZ uye DoD).
hud_saytext_internal Inosanganisira in-game chat. hud_saytext (cmd) inoshandura CVar iyi. Izvi zviri muCS, CZ neDoD chete.
hud_saytext_time Inoisa nhamba yemasekonzi ayo mameseji ekutaura anoratidzwa.
hud_takesshots Inokutendera kuti utore mifananidzo kumagumo emepu.
people_join_team Izvi zvinoshandiswa kune zvirambidzo zvekuraira. Gadzirisa ku "chero" kubvumira mirairo yese (default), "ct" kubvumidza chete vanopikisa-magandanga, uye "t" kubvumidza magandanga chete.
IP Kana chinongedzo kune sevha yemhepo chisingakwanisi kugadzikiswa, iwe unozofanirwa kushandisa shanduko iyi pane server's command line, uchitsanangura server's ip.
joyadvanced Izvi zvinobvumira kushandiswa kweakisi yakasiyana-siyana kuti ishandiswe, kutanga ne joyadvaxisX, apo X ndiro tsamba yeaxis.
rufaro Inodzora iyo DirectInput R axis mepu (kazhinji joystick-rudder). Zvinotevera zvinodzora zvinogona kuiswa: 0 = Axis haishandiswe 1 = Axis yakagadzirirwa kuenda mberi uye kumashure 2 = Axis yakagadzirirwa kutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yakagadzirirwa kufamba kune rumwe rutivi 4 = Axis yakagadzirirwa kutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) ). Neimwe nzira, inogona kudomwa semhedziso axis (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina kumira uye dzinongotenderera. Kuti utarise axis iyi seyakabatana axis, wedzera gumi nematanhatu kune iri pamusoro kudzora nhamba. Izvi hazvizove nemhedzisiro kusvika joyadvanced yakaiswa ku16.
joyadvaxis Inodzora mepu yeDirectInput U axis (custom axis). Zvinotevera zvinodzora zvinogona kuiswa: 0 = Axis haishandiswe 1 = Axis yakagadzirirwa kuenda mberi uye kumashure 2 = Axis yakagadzirirwa kutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yakagadzirirwa kufamba kune rumwe rutivi 4 = Axis yakagadzirirwa kutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) . Neimwe nzira, inogona kudomwa semhedziso axis (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina nzvimbo yekumira uye dzinongotenderera. Kuti usarudze iyi axis sehama axis, wedzera gumi nematanhatu kune nhamba yekudzora iri pamusoro.
joyadwakisw Inodzora mepu yeDirectInput V axis (custom axis). Zvinotevera zvinodzora zvinogona kuiswa: 0 = Axis haishandiswe 1 = Axis yakagadzirirwa kuenda mberi uye kumashure 2 = Axis yakagadzirirwa kutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yakagadzirirwa kufamba kune rumwe rutivi 4 = Axis yakagadzirirwa kutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) . Neimwe nzira, inogona kudomwa semhedziso axis (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina nzvimbo yekumira uye dzinongotenderera. Kuti usarudze iyi axis sehama axis, wedzera gumi nematanhatu kune nhamba yekudzora iri pamusoro.
joyadvaxix Inodzora kuratidzwa kweDirectInput X axis (kazhinji joystick kuruboshwe uye kurudyi). Zvinotevera zvinodzorwa zvinogona kuiswa: 0 = Axis isingashandiswe 1 = Axis yekuenda mberi nekudzoka shure 2 = Axis yekutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yedivi kuenda kudivi kufamba 4 = Axis yekutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) Pamusoro pezvo, inogona kunzi axis yakakwana (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina nzvimbo yekumira uye dzinongotenderera. Kuti usarudze iyi axis sehama axis, wedzera gumi nematanhatu kune nhamba yekudzora iri pamusoro. Izvi hazvizove nemhedzisiro kusvika joyadvanced yakaiswa ku16.
JoyAdVaxis Inodzora kuratidzwa kweY-axis DirectInput (kazhinji chimuti chemufaro kumberi nekumashure). Zvinotevera zvinodzora zvinogona kuiswa: 0 = Axis haishandiswe 1 = Axis yakagadzirirwa kuenda mberi uye kumashure 2 = Axis yakagadzirirwa kutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yakagadzirirwa kufamba kune rumwe rutivi 4 = Axis yakagadzirirwa kutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) . Neimwe nzira, inogona kudomwa semhedziso axis (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina kumira uye dzinongotenderera. Kuti usarudze iyi axis sehama axis, wedzera gumi nematanhatu kune nhamba yekudzora iri pamusoro. Izvi hazvizove nemhedzisiro kusvika joyadvanced yakaiswa ku16.
joyadvaxis Inodzora kumepu kweZ-axis DirectInput (kazhinji kamuti kemutsindo). Zvinotevera zvinodzora zvinogona kuiswa: 0 = Axis haishandiswe 1 = Axis yakagadzirirwa kuenda mberi uye kumashure 2 = Axis yakagadzirirwa kutarisa kumusoro uye pasi (pitch) 3 = Axis yakagadzirirwa kufamba kune rumwe rutivi 4 = Axis yakagadzirirwa kutendeukira kuruboshwe uye kurudyi (yaw) ). Neimwe nzira, inogona kudomwa semhedziso axis (yakadai seyemufaro) kana hama axis (yakadai seFPgaming trackball kana WingMan Warrior SpinControl). Mhedziso mbezo inotsanangurwa sekuve nekumira, ukuwo mbezo dzinenge dzisina kumira uye dzinongotenderera. Kuti usarudze iyi axis sehama axis, wedzera gumi nematanhatu kune nhamba yekudzora iri pamusoro. Izvi hazvizove nemhedzisiro kusvika joyadvanced yakaiswa ku16.
joyforwardsensitivity Inodzora mwero wekukwirisa, kana kuti inguvai yekufamba kwe joystick inodiwa kutyaira "full speed" kumberi nekumashure.
mufaro mberi chikumbaridzo Inodzora nzvimbo yakafa yekuenda mberi uye kumashure kufamba.
joypitchsensitivity Inodzora kumhanya kana chiyero chinoshandiswa paunotarisa kumusoro nekudzika.
chikumbaridzo chemufaro Inodzora nzvimbo yakafa yekutarisa kumusoro uye pasi.
joyside kunzwa Inodzora kumhanya kwekumhanyisa, kana kuti inguva yakawanda sei chejoystick kufamba kunodiwa kuti ufambe ne "full speed" kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe divi.
joysidethreshold Inodzora nzvimbo yakafa yekufamba kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe divi.
joystick Inobvumidza iwe kushandisa iyo joystick.
joyhack1 Iyi ndeimwe yemhando mbiri dzinosanganisira tsika yekupindura macurves akagadzirirwa iyo Logitech Wingman Warrior Joystick. Kana yagoneswa, izvi zvinogadzirisa nyaya yepakati.
joyhack2 Iyi ndeimwe yemhando mbiri dzinosanganisira tsika yekupindura macurves akagadzirirwa iyo Logitech Wingman Warrior joystick. Kana chimiro ichi chabatidzwa, chinobvisa dambudziko re "kusadzora" kutenderera kana uchishandisa joystick kutendeuka kana kutarisa kuruboshwe/kurudyi.
mufaro yawsensitivity Inodzora kumhanya kana kuti reshiyo inoshandiswa paunotarisa kubva kuruboshwe kuenda kurudyi.
chikumbaridzo chemufaro Inodzora nzvimbo yakafa yekutarisa kuruboshwe nekurudyi.
Lambert Inoisa iyo Lambert level. Lambert ari kuvheneka mhando dzevatambi.
light range Inoseta mutambo wemagetsi gamma. Iine kuchengetedzwa kunofanira kumanikidzirwa ku2.5 paunenge uchibatanidza kune sevha, asi inoratidzika se "yakaputsika" chengetedzo nokuti gamma inogadzirirwa kusati kwaiswa kuchengetedzwa, saka iwe unogona kuchinja iyo usati wabatana nevhavha. Kana girinedhi rikaputika munzvimbo kana kuti ukabatidza tochi, gamma yenzvimbo yacho inodzokera kune yakajairika. Kana ikashandurwa, inogona kukanganisa mutambo. **Paft Rongedza: Hongu, 0 yaimbove yakaderera kukosha uye zvino mutambo waparara, asi 1.9 ndiyo yakaderera.
download se8 bit Inosandura kushandiswa kweiyo yakaderera mhando 8-bit audio. Pa = 8 bits. Off = 16 bits.
logsdir Inotsanangura dhairekitori panogadzirwa sevha logs uchishandisa iyo "log" yekuraira.
lookpring Inogonesa otomatiki kuona pakati kana mbeva kubhurawuza kwakadzimwa (-mlook). Inofanirwa kusetwa kana kubhurawuza kwembeva kuchigoneswa (+mlook). Inodzimawo kufamba kwembeva kukwira nekudzika.
glancestrafe Kana chimiro ichi chaitwa, kufamba kwembeva yekuruboshwe/kurudyi kunoita kuti ufambe nedivi pane kutendeuka.
lservercfgfile Inoseta iyo faira yekumisikidza inotakurwa kana server yekuteerera yatanga.
mapchangecfgfile Izvi zvinogadzira faira rekugadzirisa iro rinotakurwa pese panochinjwa mepu.
mapcyclefile Izvi zvinoseta faira richashandiswa kumepu loop.
max_queries_sec Ichi chikamu cheyero-yekumisikidza kodhi yekunze-kwe-bhendi zvikumbiro (kureva vatambi, ruzivo). Inotsanangura huwandu hwezvikumbiro pasekondi pamushandisi (avhareji pamusoro max_queries_window).
max_queries_sec_global Ichi chikamu cheyero-yekumisikidza kodhi yekunze-kwe-bhendi zvikumbiro (kureva vatambi, ruzivo). Inotsanangura huwandu hwehuwandu hwezvikumbiro pasekondi kune zvese zvikumbiro.
max_queries_window Ichi chikamu cheyero-yekumisikidza kodhi yekunze-kwe-bhendi zvikumbiro (kureva vatambi, ruzivo). Inotsanangura hwindo renguva yekuenzanisa chiyero chekukumbira.
max_shells Huwandu hwepamusoro hwema projectiles anogona kudzingwa kubva kuzvombo zvevamwe vatambi vese panguva imwe chete.
max_smokepuffs Huwandu hwehutsi hwehutsi hunobhururuka kubva muutsi magirinedhi nemabara ako (mumadziro) panguva.
mhando Inoisa modhi yako kuHafu-Hupenyu. Mazita emhando anoshanda: barney, gina, gman, gordon, Helmet, Hgrunt, Recon, Robo, Scientist, Zombie.
motdfile Seta iyo faira kuti ishandiswe semeseji yezuva (yekugamuchira skrini).
MP3FadeTime Iyi ndiyo nhamba yemasekonzi inotora kuti mp3 ipere zvachose uchishandisa "cd fadeout" murairo.
MP3Vhoriyamu Inoisa iyo MP3 vhoriyamu level.
mp_allowmonsters Bvumira kana kudzima kutaridzika kwezvikara muvazhinji. (hafu yeupenyu chete)
mp_autocrosshair Kana sv_aim iri 1, izvi zvinobatidza red crosshair muvazhinji vatambi.
mp_autokick Gonesa otomatiki kuvharira kwevaurayi vechikwata uye kukava kwevatengi vasina basa.
mp_autoteambalance Inogonesa command auto-bancing.
mp_buytime Rongedza huwandu hwaunoda kutenga nguva yekutenderera yega yega.
mp_c4timer Nguva yenguva C4. Minimum 15, yepamusoro 90. Kukosha kunofanira kuva 35 seconds mumachisi.
mp_chattime Huwandu hwenguva mumasekonzi iyo vatambi vanogona kutaura kana mutambo wapera.
mp_conssistency Izvi zvinotarisa kuona kana mutengi wekubatanidza akachinja mamodheru kana manzwi kuti ape mukana usina kunaka. Kune mamwe mamodheru, inongotarisa saizi kuti ive nechokwadi kuti haipfuure hitboxes. Asi izvi hazvitarise ese mamodheru/manzwi/… Mamwe acho achiripo, sehutsi sprite. (kwete kusvuta)
mp_decals Iyo inoisa huwandu hwepamusoro hwemadhiri (splash, logo, maburi maburi, kupiswa kwegrenade, ropa pasi) kuti ionekwe pachiratidziri. Inofanira kuiswa isati yabatana nevhavha. Izvi hazvina kufanana ne r_decals.
mp_defaultteam Kana yaiswa ku1, vatambi vanomanikidzwa kupinda muchikwata chekutanga (timu index 0) pavanopinda. Zvikasadaro, vanomanikidzwa kupinda muchikwata chine vatambi vashoma. Kana mepu ichivamanikidza kupinda muchikwata chekutanga (mp_defaultteam 1), saka vatambi havabvumidzwe kuchinja zvikwata panguva yemepu iyoyo (kunze kwekunge mepu yachinja timu yavo). Ichi ndicho chimwe chezvivakwa zvemepu, saka mepu inozoisa otomatiki kukosha kwecvar zvichienderana nezvakasarudzwa nemupi.
mp_fadetoblack Kana yaiswa 1, sikirini yemutambi inoita dema kusvika pakupera kweraundi kana vafa (skirini ichiri kushanda zvakanaka kuti mutambi agone kutaura, ona mhinduro, nezvimwe.) Inodarika mp_forcechasecam
mp_falldamage Inogonesa kukuvara kwechokwadi kwekudonha muHalf-Life.
mp_flash Gadzirisa ku 1 kugonesa kushandiswa kwematochi, 0 kudzima.
mp_footsteps Gadzirisa ku1 kugonesa matanho, 0 kudzima.
mp_forcecamera Iyi cvar yakawedzerwa muCS 1.4 uye inoita kunge yakafanana ne mp_forcechasecam. Kana mp_forcecamera uye mp_forcechasecam zvakaiswa kune imwe kukosha kunze kwe0, mp_forcecamera icharegeredzwa uye kukosha kwe mp_forcechasecam kuchashandiswa pachinzvimbo. vatambi vechikwata chete (Yemahara Tarisa inoshanda)
mp_forcechasecam Zvinotaridza kunge musiyano uyu wakangofanana mp_forcechasecam. Kana mp_forcecamera uye mp_forcechasecam zvakaiswa kune imwe kukosha kunze kwe0, mp_forcecamera icharegeredzwa uye kukosha kwe mp_forcechasecam kuchashandiswa pachinzvimbo. vatambi vechikwata chete (Yemahara Tarisa inoshanda)
mp_forcerespawn Kana ikagoneswa, vatambi vanongozvibereka parufu.
mp_fraglimit Kana yaiswa kune imwe kukosha kunze kwe0, kana mhinduro yemumwe munhu yasvika mp_fraglimit , sevha inoshandura mepu.
mp_fragsleft mp_fragsleft ndiyo nhamba yezvimedu zvasara kana ukaisa mp_fraglimit. Iwe unongonyora mp_fragsleft muserver console uye ichakuudza huwandu hwemafrags asara zvichienderana ne mp_fraglimit. CHERECHEDZA: mp_fraglimit haipo muCS uye inongoratidzika kushanda muHafu-Hupenyu.
mp_freezetime Nguva yenguva mumasekonzi enguva yechando panotanga kutenderera. Gadzirisa ku0 kudzima.
mp_friendlyfire Gadzirisa ku1 kugonesa hushamwari moto, 0 kudzima.
mp_ghost frequency Ghost update nguva. Masekonzi mangani asara kusvika imwe update. Mu cs beta 5.0 waigona kuona vataridzi vemahara vachifamba kana wafa (vainzi zvipoko). Asi zvipoko zvakabviswa mushure. Iyi cvar manje haina mhedzisiro.
mp_hostagepenalty Maximum. nhamba yevatapi vaunogona kuuraya sevha isati yakupa ... kuisa izvi ku0 kuchadzima murairo uyu.
mp_kickpercent Inoisa huwandu hwevatambi vechikwata zvinotora kuvhotera mutambi.
mp_limitteams Huwandu hwevatambi vanogona kuve nechikwata chimwe pane chimwe. Kudzima zvachose kurambidzwa kwekuraira, isa kukosha ku0.
mp_logdetail Bit shanduko yekuseta nhanho yeruzivo rwekutema matanda "mp_logdetail 0" » Log hapana kurwiswa "mp_logdetail 1" » Log kurwiswa kubva kuvavengi "mp_logdetail 2" » Log kurwiswa kubva kune vaunoshanda navo "mp_logdetail 3" » Log kurwiswa kubva kuvavengi UYE vechikwata
mp_logcho Kana ikagoneswa, mameseji elogi anoratidzwa muserver console.
mp_logfile Inogonesa server console kupinda kune faira mumatanda / folda.
mp_logmessages Inoshandiswa sevha admins kupfira mameseji ekutaura mumafaira avo egi.
mp_mapvoteratio Seta reshiyo yevatambi vanodiwa kuti vavhote pamepu imwe chete mepu isati yachinja. Iko kukosha kweiyo 0.66, zvinoreva kuti 66% yevatambi vari paserver vanofanira kuvhotera mepu imwechete kuitira kuti sevha ichinje kumepu iyoyo.
mp_maxrounds Siya huwandu hwemarounds anogona kuridzwa pamepu ari 0 kuti aenderane mp_timelimit.
mp_mirrordamage Iyi CVar haina chekuita. Yave iri muCS kubva pakutanga betas. Haisi kana muCS chaiyo cvar chikamu cheCS Manual. Ichi chinogona kunge chiri chimiro apo iwe paunorwisa vatambi vechikwata chinoratidza kukuvara kumashure kwauri uye ivo havaparadze kukuvara. Vagadziri vekutanga veCS pamwe havana kupedza kodhi kana kukanganwa nezvayo.
mp_playerid Shandura ruzivo rwunoonekwa nevatambi pane iyo mamiriro 0 ese: vatambi vanoona ese mazita akanyorwa pachimiro bha (nemavara echikwata chavo) 1 timu chete: vatambi vanongoona mazita evavanoshanda navo uye nhapwa pane iyo mamiriro 2 kubva: vatambi usaone chero mazita ari mubhawa mamiriro ebhawa (kusanganisira hostages)
mp_roundtime Nguva shoma yekutenderera 1 min. Iyo yakanyanya kutenderera nguva ndeye9 maminetsi. Inotsigira chidimbu maminetsi (1.5 - 90 masekondi).
mp_startmoney Inoisa huwandu hwemari vatambi vanotanga mutambo nayo.
mp_teamlist Izvi zvinotarisa mazita emirairo muHLDM zvichienderana nemhando. Hapana chekuisa, bvumira zvese mirairo. Rondedzero yemazita echikwata anoshanda: barney, genie, gman, gordon, ngowani, xgrant, scout, robhoti, sainzi, zombie.
mp_teamoverride Inobvumira mamepu kudarika server mp_teamlist.
mp_timeleft mp_timeleft ndiyo nguva yasara usati wachinja mepu kana ukaisa mp_timelimit. Iwe unongonyora mp_timeleft mune server console uye ichakuudza iyo nguva yasara zvichienderana ne mp_timelimit. CHERECHEDZA: mp_timeleft inoshanda chete muHafu-Hupenyu. Izvi hazvina maturo muCS nekuda kwe "timeleft" mutengi console command inoita chinhu chimwe chete.
mp_timelimit Nguva pakati pekutenderera kwekadhi.
mp_tkpunish Kana ikaiswa ku1, TKers inozourawa yega paround rinotevera.
mp_weaponstay Izvi zvinoita kuti chombo chibve chamuka zvakare mushure mekunge mutambi anhonga, izvo zvinoita kuti mutambi akwanise kubata chombo nekukasika.
mp_windifference Inoshandiswa neCS kuona mutsauko uripo pakati peT uye CT payoffs kushandisa iyo yekukunda mantiki.
mp_winlimit Ichapeta mepu mushure mekunge timu imwe yasvika iyi nhamba yekuhwina.
m_sefa Inoshandura sefa yembeva. Sefa yembeva inopfavisa kufamba kwembeva.
m_mberi Iyo inosarudza kuti unomhanya sei kumberi / kumashure kana uchifambisa mbeva yako. Kuti uende kumberi/kumashure negonzo, unofanira kudzima kubhurawuza negonzo.
m_pitch Inoseta sensitivity ratio yemakonzo kufamba kumusoro nekudzika. Nhamba dzisina kunaka dzinokonzeresa kufamba kwembeva. Izvi hazvigone kuchinjwa kunze kwekunge mune sarudzo menyu ine "Reverted Mouse" iyo inoisa m_pitch ku -0.022.
m_side Inotarisa kuti unofamba sei paunofambisa mouse yako. Inoda lookstrafe 1 uye Mouse Tarisa Inogoneswa (+mlook) kuti ufambe negonzo.
m_yaw Inoisa reshiyo yekunzwa pakati pekuruboshwe nekurudyi mafambiro embeva. Nhamba dzisina kunaka dzinokonzeresa kufamba kwembeva.
zita Inoisa zita rako.
net_graph Inobvumidza iwe kushandisa net_graph. Inoratidza ruzivo nezvezvirongwa zvako, ping, furemu chiyero, nezvimwe zvichienderana nerudzi rwetiweki. Kuti uwane rumwe ruzivo verenga izvi
net_graphpos Inoisa nzvimbo ye net_graph. 0 = kurudyi, 1 = pakati, 2 = kuruboshwe
net graphwidth Inoseta hupamhi hwenet_graph. Iyo yakakwira nhamba, yakakura iyo net_graph.
net_scale Inoseta nhamba yemabhaiti anoratidzwa papixel imwe munet_graph.
net_showdrop Inoratidza meseji mune koni kana pakiti yadonha. Izvi ndezvese mutengi uye server.
net_showpackets Inoratidza mapaketi anouya/anobuda. Izvi ndezvese mutengi uye server.
pasina inzwi Ruzha rwese runofanira kudzimwa, kunze kwerumwe ruzha, seruzha rwetsoka kana bara rarira.
pasiwedhi Inoseta password yeserver yaunoda kubatanidza nayo. Iyi cvar inoshandurwa otomatiki paunopinda muvhavhavha-yakachengetedzwa server uchishandisa Server Explorer.
kumbomira Bvumira kana kudzivirira vatambi kuti vambomira mutambo vachishandisa murairo wekumbomira.
poti Sets port kuti ishandiswe kune server yako.
chiratidzo Iyi ndiyo nhamba yemabyte pasekondi inotumirwa neserver kune mutengi. Chete mitambo yepa internet (sv_lan 0), kunze kwekunge sv_lan_rate <1001 mumutambo weLAN (sv_lan 1).
rcon_address Izvi zvinobvumira vatengi kuti vabatanidze kure kune sevha/HLTV uye kushandisa rcon mirairo pasina kana kuve mumutambo. Gadzirisa kukero yeIP yeseva pasina nhamba yechiteshi (1.2.3.4).
RCON password Iyo inoisa iyo rcon password pane sevha kuitira kuti maadmins ashandise admin mirairo / zvinosiyana. Vatungamiri vanofanirawo kuseta rcon_password mune yavo client console kuti vakwanise kushandisa admin mirairo/sarudzo nercon command.
rcon_port Iyo port iyo mutengi anogona kubatanidza ari kure kune server. Ona rcon_address.
rudzi rwenhamba Vagadziri vemakadhi vanoshandisa izvi kugadzira echo pamepu yavo, izvi zvinongochinja kana mutambi apinda munharaunda ine env_sound entity. Various values: 0 = Normal (off)1 = General2 = Metallic Small3 = Metallic Diki4 = Metallic Medium5 = Metallic Large6 = Tunnel Diki7 = Mugero Wepakati8 = Tunnel Hombe9 = Kamera Diki10 = Kamera Yepakati 11 = Kamera Yakakura12 = Inopenya Diki13 = Inopenya Pakati14 = Yakajeka Yakakura115 = Mvura 216 = Mvura 317 = Mvura 18 = Concrete Diki19 = Concrete Medium20 = Concrete Hombe 121 = Hombe 222 = Hombe 323 = Hombe 24 = Bako Diki25 = Bako Riri Pakati26 = Bako Guru127 = Freak 228 = Freak 3
r_ambient_b Artificially inoshandura chiedza chenyika yazvino nehukoshi hwebhuruu.
r_ambient_g Artificially inoshandura kupenya kwenyika yazvino kuita girinhi.
r_ambient_r Artificially inoshandura chiedza chenyika yazvino kune kukosha kwakatsvuka.
r_bmodelinterp Inoona kana mafambiro ebhurashi ekufambisa achizopindira chinzvimbo chavo (kupfavisa maonero).
r_cachestudio Inosarudza kana cache studio modhi "hulls" yekukurumidza kuyedzwa - iyo cache ine mashoma saizi / hupenyu hwese. Uku ndiko kuita optimization.
r_cullsequencebox Mumutambo wevazhinji, kana waiswa, pachinzvimbo chekungotarisa bbox kuseri kwemuoni, isu tinotarisa iyo yese truncated piramidhi yeazvino animation extents (sequence hwindo).
r_decals Inoisa muganho wezvidhori (logo spatter, maburi maburi, kutsva kwegirinedhi, ropa pasi). Kana yakakwira kupfuura mp_decals, mp_decals ichaiswa (reset to mp_decals kana ichibatanidza kune server). Izvi hazvina kufanana mp_decals.
r_detailtextures Gonesa/dzima maumbirwo akadzama. In cs 1.6, nekusarudzika, kune akadzama maumbirwo chete eCobble.
r_drawentities Inodzora kuti zvinhu/mienzaniso inodhirowa sei. 0 = Hapana zvinhu 1 = Default uye kudhirowa zvinhu zvakajairika 2 = Zvinhu zvinodhirowewa seskeleton 3 = Zvinhu zvinodhirowewa, bhonzo rega rega rine bhokisi rinosungirirwa 4 = Zvinhu zvinodhonzwa nebhuroko 5 = Mabhuroko akasiyana emutambi nechombo CHERECHEDZA: anoshanda chete muSOFTWARE - D3D/OpenGL modhi: single player chete SoftWare: multiplayer mode
r_drawflat Mu "r_drawflat 1" tinoona kuti injini inofanira kupaza sei nzvimbo kuti idhirowe. Ndinofunga kuti iri kushandiswa nevanodhirowa mapepa.
r_draworder WallHack, iyo inoratidza izvo zvinoverengerwa kuburikidza nemadziro, inoshandiswa nevanodhirowa mapepa kunatsiridza kuita kwemepu.
r_drawviewmodel Chinja mufananidzo wezvombo.
r_speeds 0 = Usaratidze renderer speed statistics. 1 = Ratidza renderer speed statistics. (Mugadziri 1 anodiwa)
r_dynamic Kupenya kwesimba ndiko kana zvinhu zvakavhenekerwa zvinogadzira fungidziro pamadziro kana zvinhu zvakavatenderedza (semuenzaniso: maroketi muhafu yehupenyu). Iwe unozovandudza kuita nekudzima izvi. Asi mushure meiyo HL yekuvandudza, yakavharwa kune 1 mune akawanda.
r_fullright Kuisa izvi ku "1" zvinoreva kuti hapana mepu dzemwenje, uye ichapa zvese zvimiro pasina chero shading / mwenje (saka unozopedzisira wava nemavara akajeka, anopenya zvekuti kunyangwe mwenje wetochi hauonekwe). Kuiisa ku "2" zvinoreva malightmaps chete (ese mamodheru gouraud shading pasina maumbirwo). CHERECHEDZA. ZVINHU ZVAKASIYANA HAZISI ZEOPENGL, CHETE CHEPROGRAM MODE. Zvakanaka, izvi zvinogona kubatsira kune vanogadzira mapepa. Seti ye "3" inongoreva mepu, asi ine offset mesh. Kuisa ku "4" kwakafanana ne "3", asi inoratidzawo mip level yeimwe neimwe nzvimbo maererano nemutambi.
r_glowsshelfreq Inoseta kupenya frequency yevatambi modhi. Mamodheru evatambi anoratidzwa nemaseva plugins. Semuyenzaniso, respawn dziviriro mumutambo wekufa.
r_graphheight Inogadzirisa urefu hwechati. Ona r_timegraph
r_lightmap Ini ndinongowana mhedzisiro neiyi shanduko muD3D uye Software: D3D: r_lightmap -1 kana 1 = White madziro.
r_lightstyle r_lightstyle 1 inobvisa mwenje yese pamepu, asi iwe unogona kuona vavengi nedenga.
r_luminance r_luminance 1 inoita kuti mepu yose iite blue-green.
r_maxedges Iyi vhezheni inoseta huwandu hwepamusoro hwemapendero epasi kuti ape.
r_maxsurfs Musiyano uyu unoseta huwandu hwepamusoro hwenzvimbo dzakati sandara kuti dzipe.
r_mirroralpha Mirror effect. Yakarambwa uye haina kutsigirwa.
r_mmx Izvi zvinosanganisira MMX optimization. MMX inowonekwa otomatiki (1=yakagonesa, 0=yakaremara), asi unokwanisa kuimanikidza kuibatidza kana kuidzima neizvi.
r_norefresh Inodzima nyika uye HUD zvigadziriso.
r_new Kutanga iwe unofanirwa kuziva kuti VIS chii: VIS ipfupi kune Inooneka Ruzivo Set. Izvi zvinogadzira izvo zvinogona uye zvisingaonekwe kubva kune dzimwe nzvimbo pamepu. Hafu-Hupenyu inozoshandisa ruzivo urwu kana mutambo watanga kukurumidza kupa nekudhirowa chete izvo mutambi anogona kuona. unogona kuona zvose. Unogona kuedza ne gl_wireframe 2 kuti uone mhedzisiro.
r_numedges Inoratidza nhamba yemapendero anoratidzwa panguva imwe chete.
r_numsurfs Inoratidza huwandu hwendege dzebhurashi dzinoratidzwa panguva imwe chete.
r_polymodelstats Inoratidza huwandu hwemhando dzepolygon dzakaratidzwa
r_reportedgeout Iyo inoshandura kuratidzwa kwekuti mangani mapendero asina kuratidzwa. Inoshanda chete nemugadziri 1.
r_reportsurfout Iyo inoshandura kuratidzwa kwekuti mangani epasi asina kuratidzwa. Inoshanda chete nemugadziri 1.
r_rates Inoshandiswa nemamepu kuona kukosha kweepoly uye wpoly pakuita kwemepu.
r_timegraph Inoshandura kuratidzwa kwegirafu rinoratidza nguva yekuburitsa skrini. Zvakafanana net_graph, asi yeFPS chete.
r_traceglow Inogonesa occlusion calculation. Kana ikagoneswa, light halos (yakagadzirwa ne env_glow entity) uye kumwe kuputika sprites hakuzoonekwe kuburikidza neAI vatambi (vatapi muCS, masayendisiti uye zvikara muHL) kana vari kumashure kwavo.
r_wadtextures r_wadtextures inoshandiswa kugonesa kana kudzima yakagoneswa wad maumbirwo.
r_wateralpha r_wateralpha 1 inogonesa alpha mvura kusanganisa (default). Kuidzima (0), r_novis inofanira kugoneswa. Kuidzima kuchakubvumira kuti uone pamusoro pemvura zvose zviri pasi pemvura (izvo zvinonyatsoita kuti pamusoro pemvura ive pachena). Izvi hazvishande neHalf-Life 1 injini. Kuti uwane mvura yakajeka, mappers anofanira kushandisa func_water entity.
r_waterwap Kana 0, saka hapana pasi pemvura wave maitiro. Shandisa 0 kuti uonekwe zviri nani mumvura.
scr_centertime Iyo nguva mumasekonzi iyo mameseji ari papakati skrini anoramba achishanda. (Muenzaniso: meseji "Magandanga akakunda!"). Ziva kuti izvi zvinoshanda chete kana zvakaiswa meseji isati yadhindwa, kwete painenge ichiratidzwa pachiratidziri.
scr_connectmsg Uyu ndiwo mutsetse wekutanga wemeseji diki mune mavara machena akadhirowa pabhokisi dema pazasi pepakati pechidzitiro. Iyo inowanzoonekwa chete kana yakabatana nemaseva, sezvo zvese zvinopihwa pamusoro pazvo. Inoonekwawo ne r_norefresh 1 kana pakucheka kunze kwemepu. Zvichienderana nemhando yeruoko rwako, kana ikabviswa kubva kune server, inogona kungoonekwa zvishoma kana yakabatana kune imwe.
scr_connectmsg1 Mutsetse wechipiri weConnect-Message window. Ona scr_connectmsg.
scr_connectmsg2 Mutsetse wechitatu weConnect-Message window. Ona scr_connectmsg.
scr_conspeed Iyo inoseta kumhanya uko koni inosvika pakuonekwa kana mutambi achidzvanya kiyi yekoni. Izvi hazvichashandi muvhezheni 1.6 nekuti iyo console haichaoneki pakuona.
scr_ofsx Izvi zvinoseta X offset yekwakabva maonero.
scr_ofsy Izvi zvinoseta Y offset yekwakabva maonero.
scr_ofsz Izvi zvinoseta Z offset yekwakabva maonero.
utetsa Inoseta manzwiro emouse.
servercfgfile Inoseta iyo faira yekumisikidza iyo inotakurwa kana server yatanga. Zvemaseva akazvitsaurira chete.
unyanzvi Inoisa iyo yekuomerwa nhanho muHafu-Hupenyu single player modhi (seta otomatiki kana iwe ukasarudza iyo yekuoma nhanho mune mutsva mutambo menyu). 1 : Easy 2 : Pakati 3 : Complex
sk_ * Zvese zvinosiyana zvinotanga ne sk_ kudzora hutano hweHL monsters uye kukuvadzwa kwechombo kune yega yega matatu matatu hunyanzvi mazinga (ona "hunyanzvi" shanduko). Muenzaniso: sk_12mm_bullet3 - kukuvadza kwakadini kunoita 12mm bullet ine hunyanzvi level 3.
snd_noextraupdate Kana ikagoneswa, inodzima "yakawandisa" zvigadziriso zveodhiyo zvinogona kuitika panguva yekupa kana mamwe mamiriro angangoita akaderera furemu.
spec_autodirector Izvi zvinogonesa iyo Auto Director yekuona maitiro. Auto Director inofambisa otomatiki kamera zvichibva pane iyo mutambi ari kutarisa. Izvi zvinoshanda kuMahara Chase Cam, Yakakiyiwa Chase Cam uye Chase Mepu Overview. (Zvakafanana ne spec_autodirector_internal yeCS, CZ uye DoD).
spec_autodirector_mukati Izvi zvinogonesa iyo Auto Director yekuona maitiro. Auto Director inofambisa otomatiki kamera zvichibva pane iyo mutambi ari kutarisa. Izvi zvinoshanda kuMahara Chase Cam, Yakakiyiwa Chase Cam uye Chase Mepu Overview. spec_autodirector (cmd) inoshandura iyi CVar. Izvi zviri muCS, CZ neDoD chete.
spec_drawcone Inochinja iyo 90-degree orange koni mukuona modhi, inoratidza pauri kutarisa mune spec mode (yakafanana ne spec_drawcone_yemukati ye CS, CZ, uye DoD).
spec_drawcone_mukati Inoshandura iyo 90-degree orange koni yekuona mukutarisa mode, iyo inoratidza pauri kutarisa mune spec mode. spec_drawcone (cmd) inoshandura iyi CVar. Izvi zviri muCS, CZ neDoD chete.
spec_drawnnames Inoshandura mazita ekudhirowa mumodhi yekutarisa (zvakafanana ne-spec_drawnames_yemukati yeCS, CZ neDoD).
spec_drawnnames_mukati Inoshandura mazita ekudhirowa mumodhi yekutarisa. spec_drawnames (cmd) inoshandura iyi CVar. Izvi zviri muCS, CZ neDoD chete.
spec_drawstatus Inoshandura ruzivo rwemutambo (mepu yazvino, nguva yemutambo, ...) inoratidzwa mukona yepamusoro yekurudyi yechidzitiro mune yevaoni (yakafanana ne spec_drawstatus_yemukati yeCS, CZ uye DoD).
spec_drawstatus_mukati Inoshandura ruzivo rwemutambo (mepu yazvino, nguva yemutambo, nezvimwewo) inoratidzwa mukona yepamusoro yekurudyi yechidzitiro mune yevaoni. Ingori CS, CZ uye DoD uye haichashande mumitambo iyoyo kubvira Steam.
spec_mode_mukati Kuchinja uku uchitamba hakuna zvakunoita. Iwe unofanirwa kuichinja usati wapinda sevha. Iyo inoseta yekutanga yekucherekedza modhi yaunayo paunopinda mucherechedzi modhi (kana iwe wafa kana mucherechedzi). Izvi zvinongo shandurwa otomatiki paunochinja mucherechedzi modhi uchishandisa kiyi yeJUMP, iyo spec menyu, kana iyo spec_mode command. mumamiriro ezvinhu ekukurumidzira uye Czech Republic.
spec_pip Seta iyo PIP yekuona maitiro. 0 : Disabled 1 : Player Chase Camera 2 : First Person 3 : Chase Map Maonero (zoomed out) 4 : Chase Map Maonero (zoomed in) 5 : Buggy Mode (unoona cone sprite view + player sprite view like in the map view, asi anoshanda mumunhu wechitatu, nezvimwe…)
spec_scoreboard Inobatidza/kudzima bhodhi. "togglescores" (command) inoshandura iyi CVar. Uku kutsanangurwa kweCVar, asi haufanirwe kunge uri muoni kuti uishandise. Izvi zviri muCS, CZ neDoD chete.
sutu volume Inoseta vhoriyamu yeHEV sutu inonzwika muHalf-Life.
sv_accelerate Inoseta kumhanya kwekukurumidza. Yakakiyiwa (chete muCS), saka inongochinja kune yakasarudzika kukosha (5). Asi muHL unogona kuichinja uye kukosha kweiyo 10.
sv_aim Inogonesa auto-chinangwa (kana yako crosshair iri pedyo nemuvengi). Inoshanda chete muHalf-Life.
sv_airaccelerate Inotara kuti unomhanyisa sei mumhepo. Shandisa zana pamakadhi ekusevha.
sv_allowdownload Inobvumira sevha kurodha chero zvemukati kune mutengi (mepu, zvipfapfaidzo, nezvimwewo)
sv_allowupload Inobvumira vatengi kuti vatumire tsika yekupuruzira kune server.
sv_alltalk Bvumira vatambi vakafa kuti vataure kuburikidza nekutaura kwezwi nevatambi mhenyu. Bvumirawo vatambi kuti vataure nevanopikisa timu/vaoni.
sv_bounce Inodzora kudhumhana kwe "kubhururuka" projectiles painorova materu.
sv_cheats Uyu murairo unokubvumira kushandisa cheat codes senge impulse 101 (16000 mari) kana impulse 102 (ropa). Zvese zvakasiyana muchikamu che "cheat" murunyorwa runoshanda chete kana zvagoneswa.
sv_clienttrace sv_clienttrace inoseta bhokisi remutambi rekusungirirana (nezvinhu zvenyika). Izvi hazvina kufanana nekuisa iyo hitbox size (inoshandiswa bullet hits). Izvi hazvigone kuchinjwa muCS, zvinomanikidzwa ku 1. Kukosha kunogona kusiyana nemamwe maHL mods. (3.5 inoshandiswa muDoD nezvimwewo)
sv_contact Inoshandiswa kuseta sevha muridzi email.
sv_downloadurl Kuisa iyi CVAR kunobvumira vatengi kurodha zvemukati zvemukati kuburikidza neHTTP pane kutora zvirimo kubva kuseva yemutambo nekukurumidza. Seta iyi parameter ku "" (tambo isina chinhu) kuti udzokere kune zvakajairwa kurodha.
sv_enableoldqueries Kuseta "sv_enableoldqueries" kune 1 inobvumira maitiro ekare (hapana chikumbiro/mhinduro) mibvunzo kushanda (izvi zvinokutendera kushandisa yekare HL1 Engine core query protocol). Izvi zvinofanirwa kuvharwa izvozvi nekuti webserver browser nezvimwe zviri kushandisa zvikumbiro zvitsva kune server.
sv_filetransfer compression Inobvumira sevha kumanikidza uye kutumira zvakamisikidzwa zvemukati kune mutengi.
sv_filterban Inoseta packet kusefa ne IP mode. Kana yakaremara, munhu wese acharambidzwa neIP, asi IP yavo haizowedzerwe kune banlist.
sv_friction Inodzora kukwesha kwepasi. Izvi zvakakiyiwa ku4 muCS uye hazvigone kuchinjwa.
sv_gravity Inoisa simba regiravhiti. Kukosha kudiki kunoreva kushomeka kwegiravhiti. Iwe unogara mumhepo uine sv_gravity 0 uye haugone kusvetuka ne sv_gravity 12000. Negative value ine maitiro akafanana ne sv_gravity 0 asi svetuka nekukurumidza.
sv_instancedbaseline Inobvumira sevha kugadzira nekushandisa “muenzaniso” nheyo (kuzvinhu zvakaita semagirinedhi, nezvimwewo zvisina mavambo akanaka nekuti hazvina kuiswa mu.map file).
sv_lan Inosanganisira LAN server mode (hapana kurova kwemoyo, hapana humbowo, kirasi C). Vanhu vepanetiweki yako chete ndivo vanokwanisa kujoina.
sv_lan_rate Inotsanangura muyero wevatengi vese paLAN server (sv_lan 1), default ndeye 20000. Kana sv_lan_rate <1001 icharegeredzwa uye "chiyero" (mutengi side) ichashandiswa.
sv_logbans Inobatidza nekudzima kunyoreswa kwevatambi vanorambidzwa. Default ndeye 0 (kudzima).
sv_logblocks Ichi chikamu cheyero-yekumisikidza kodhi yekunze-kwe-bhendi zvikumbiro (kureva vatambi, ruzivo). Inonyora kuti ndedzipi kero dzeIP dzakavharwa neiyi kodhi. Onawo max_queries_* akasiyana.
sv_log_onefile Iyo inosarudza kana faira rimwe chete regi rakagadzirwa (muzere) kana rimwe regi faira pane mepu shanduko, sezvazviri ikozvino. Iyo yekusarudzika ndiyo maitiro azvino (imwe yekuchinja kwemepu yega yega).
sv_log_singleplayer Kana ikagoneswa, mafaira elogi achagadzirwa emitambo yemutambi mumwe chete. Ehe, kutema (login) kunofanirwa kugoneswa.
sv_maxrate Izvi zvinoseta huwandu hwehuwandu hwemabhaiti pasekondi iyo server inogona kutumira kune mutengi. 0 = isina muganho. Chete mitambo yepa internet (sv_lan 0), kunze kwekunge sv_lan_rate <1001 mumutambo weLAN (sv_lan 1).
sv_maxspeed Inoisa iyo yakanyanya kumhanya. MuCS, mushure me260, hapana chinoshanduka nekuda kwekumhanya kwechombo (Ne scout, unoenda nekukurumidza, uye iyi i260). Ona iyo foramu kuti uwane rumwe ruzivo.
sv_maxunlag Inoisa huwandu hwemasekonzi panguva iyo netcode inotsiva ping yemumwe munhu (sv_unlag inofanira kugoneswa). Netcode inobvisa 500ms nekukasira.
sv_maxupdaterate Iyi ndiyo nhamba yepamusoro yezvigadziriso pasekondi imwe server inogona kutumira kune mutengi (ona cl_updaterate).
sv_maxvelocity Inoisa kumhanya kukuru kwechinhu chero chipi zvacho chinofamba.
sv_minrate Izvi zvinogadzirisa huwandu hushoma hwemabhaiti pasekondi imwe chete iyo server inogona kutumira kune mutengi. 0 = isina muganho. Chete mitambo yepa internet (sv_lan 0), kunze kwekunge sv_lan_rate <1001 mumutambo weLAN (sv_lan 1).
sv_minupdaterate Iyi ndiyo nhamba shoma yezvigadziriso pasekondi imwe server inogona kutumira kune mutengi (ona cl_updaterate).
sv_newunit Inoshandiswa kujekesa yakachengetwa data yemutambo kubva kumatanho apfuura kuchengetedza saizi yemutambo yakachengetwa idiki sezvinobvira. Izvi zvinoshandiswa muHalf-Life single player mepu. Iko hakuna chikonzero chekushandura iyi CVar, mappers anofanira kuiisa mu worldspawn chinhu.
sv_password Seta password yeserver. Vanhu vanoda kubatanidza kune server vanoda password.
sv_proxy Izvi zvinodikanwa kuitira kuti HLTV proxies ikwanise kubatana kune server yako. Inoisa mangani eHLTV proxies achakwanisa kubatana kune server yako. HLTV proxies inotora sevha inotsvedza saka ita shuwa kuti unozvifunga usati wagonesa izvi.
sv_rcon_banpenalty Huwandu hwemaminitsi ekuvharisa vashandisi vasina kutenderwa nercon. (0= zvachose)
sv_rcon_maxfailures Nhamba yepamusoro yenguva iyo mushandisi anogona kutadza rcon authentication asati arambidzwa. Izvi zvakafanana ne sv_rcon_minfailures, kunze kwekuti kuseta uku kwakazvimirira pane sv_rcon_minfailuretime.
sv_rcon_minfailures Nhamba yenguva iyo mushandisi anogona kutadza rcon authentication mukati mesv_rcon_minfailuretime asati arambidzwa.
sv_rcon_minfailuretime Huwandu hwenguva (mumasekondi) iyo rcon inoedza inofanira kutadza kurambidzwa kusati kwaitwa.
sv_region Izvi ndezvesevha browser mafirita kuti ataure kuti inzvimbo ipi inofanira kuonekwa sevha.
sv_restart Inoisa nhamba yemasekonzi sevha isati yatangazve mutambo. Izvi zvichagadzirisa zvese zvimedu, mapoinzi, zvombo uye mari kune default. Shandisa izvi kuronga mitambo yemadzinza. Izvi zvakafanana ne sv_restartround.
sv_restartround Inoisa nhamba yemasekonzi sevha isati yatangazve mutambo. Izvi zvichagadzirisa zvese zvimedu, mapoinzi, zvombo uye mari kune default. Shandisa izvi kuronga mitambo yemadzinza. Izvi zvakafanana ne sv_restart.
sv_send_logos Inobvumira sevha kutumira zvipfapfaidzo kune vatengi. sv_send_logos 1 inoda sv_allowdownload 1 kuti ishande.
sv_send_resources Iyi shanduko inotarisa kana zviwanikwa zvinopfuudzwa kune vatengi.
sv_skycolor_b Inoisa kukosha kweruvara rwebhuruu rwedenga.
sv_skycolor_g Inoisa kukosha kwedenga rakasvibirira.
sv_skycolor_r Inoisa kukosha kweruvara rutsvuku rwedenga.
sv_skyname Inoisa zita redenga kuti rishandiswe pamepu yazvino (vatambi vanofanirwa kubatana kana ukaishandura kuburikidza neiyi cvar kuti vaone denga idzva). Vagadziri vemakapu vanogona kuseta denga chairo remepu yavo uye rinobva raseta iyo shanduko. Kana pasina chaiswa, chinozogara chichienda kudenga: renje.
sv_skyvec_x Inoisa kutaridzika kwedenga pane x-axis.
sv_skyvec_y Inoisa y-axis yakatarisa yedenga.
sv_skyvec_z Inoisa kutaridzika kwedenga kuZ.
sv_spectatormaxspeed Inoisa iyo yakanyanya kumhanya iyo muoni anogona kufamba.
sv_stats Inotsanangura kana kuunganidza server CPU mashandisirwo statistics. Shandisa iyo "stats" kuraira kuti uone iyo CPU data data yakaunganidzwa neizvi.
sv_stepsize Izvi zvinoshandiswa kuona hurefu hwepamusoro hwaunogona kukwira usingasvetuka. Kana ikaiswa kumutengo wepamusoro, unogona kufamba pazvinhu zvirefu zvikuru. Kana ukaisa nhamba duku, haungakwanisi kukwira kunyange nhanho dukusa.
sv_stop speed Inoisa iyo shoma yekumira kumhanya pasi. MuHalf-Life uye mamwe ma mods the default value is 100. Asi muCS yakavharwa ku75, kana ukaishandura inogara ichidzokera ku75.
sv_timeout Inodzora kuti sevha ichabvisa nguva yakareba sei mutengi amira kupindura (ingangove AFK).
sv_unlag Izvi zvinobvumira vatengi kushandisa lag muripo. Isiye yakagoneswa.
sv_unlagsamples Inoseta nhamba yemapakiti anozoverengerwa kuwana ping yekuripa (sv_unlag inofanira kugoneswa). Mienzaniso: sv_unlagsamples 1 Sevha inoverenga ping kubva pamuenzaniso wekupedzisira. (default) sv_unlagsamples 2 Sevha ichaverenga ping kubva paavhareji yemasampuli maviri ekupedzisira.
sv_uploadmax Inodzikamisa saizi yepamusoro (muMB) iyo mutengi anogona kushandisa kune yakajairwa sosi (yakadai sezvinamira zvekupfapfaidza).
sv_version The default is 1.1.2.0/2.0.0.0.47.3647. Iyi ndiyo imwe ruzivo nezve server vhezheni. Idzi ndidzo nhamba dzinoonekwa paunonyora "vhezheni". Somuenzaniso, pano: 1.1.2.0/2.0.0.0 ndiyo mutambo shanduro/mod shanduro. Asi isu tose tinoziva kuti CS shanduro 1.6, asi inoratidza 1.1.2.5/2.0.0.0. Mune mamwe mods inoratidzawo 1.1.2.5/2.0.0.0 kana 1.1.2.0/2.0.0.0 kunze kweCZ apo 1.0.0.2/2.0.0.0.47 ndiyo protocol version. 3647 ndiyo vhezheni yekuvaka.
sv_visiblemaxplayers Aya ndiwo mangani maseva slots anoonekwa kubva kune server browser. Izvi zvinoshandiswa kuchengetedza slots kune vatariri. Ivo vanofanirwa kushandisa iyo yekubatanidza kuraira kujoinha yakavanzika slot. Asi pasina mod / plugin, chero munhu anogona kujoina yakavanzika slot.
sv_voicecodec Inotsanangura kuti nderipi izwi codec DLL yekushandisa mumutambo. Seta zita reDLL pasina kuwedzera. Kune maviri macodecs: voice_miles (default) uye voice_speex. voice_speex inopa yakanakisa izwi mhando. Onawo sv_voicequality.
sv_voiceenable Zvinosanganisira kutaura kwezwi.
sv_voicequality Kana sevha yako ine izwi rakagoneswa, unogona kuseta kunaka kwezwi pano. Ramba uchifunga kuti zviri nani mhando, iyo yakawanda bandwidth inzwi rako rinozoda. Izwi_speex codec inofanira kugoneswa (ona sv_voicecodec). high quality
sv_wateramp Inowedzera masaisai emvura (pamapu emvura, hongu). Iyi cvar inogadzika gl_wateramp (zvakafanana asi kudivi revatengi) kune vese vatengi.
sv_zmax Inoisa saizi yeZ-buffer. Iyi ndiyo nhambwe huru inooneka. Mamepu anogona kuseta kukosha kwaunoda pamepu yavo (ine nyika inobereka mubatanidzwa) uye inongochinja iyo cvar kana mepu yaremerwa. Inoshandura iyo gl_zmax kukosha kwechero mutengi anobatana neserver. VALVe yakawedzera shanduko iyi nekuti ne gl_zmax 0 waigona kuona nepamadziro (muD3D renderer), saka mutengi anomanikidzwa kushandisa kukosha kwesevha uye haagone kuchinja gl_zmax. Izvi zvinongogona kushandiswa muvatambi vakawanda pamaseva akazvitsaurira (zvinongoshanda mumutambi mumwe chete pamaseva ekuteerera).
sys_ticrate Uyu murairo unoseta huwandu hwepamusoro hwe "mafuremu" pasekondi imwe chete iyo server inogona kuverenga.
s_a3d Batidza A3D ruzha tekinoroji. Kadhi rako rezwi rinofanirwa kuritsigira.
s_eax Inosanganisira tekinoroji yeEAX. Kadhi rako rezwi rinofanirwa kuritsigira.
s_show Inoratidza pachiratidziro kuti ruzha rwuri kuridzwa.
techxgamma Inoseta kukosha kwegamma kwechimiro.
tfc_newmodels Izvi zvinosanganisira mhando nyowani dzevatambi muTFC.
top color Inoseta iyo yepamusoro ruvara yeHalf-Life modhi yako inoonekwa nevamwe.
traceralpha Izvi zvinoisa pachena kwevatevedzeri. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
tracerblue Izvi zvinoisa kukosha kwema tracer kuita bhuruu. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
tracergreen Izvi zvinoisa kukosha kwema tracer kusvika kugirinhi. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
tracer urefu Izvi zvinotara kuti matracer aripo kwenguva yakareba sei. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
traceroffset Izvi zvinoseta kuti matracer achabva papi kubva pachombo chako. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
yokuronda Izvi zvinoisa kukosha kwema tracer kuita tsvuku. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
kumhanya kumhanya Izvi zvinoseta kumhanya kwevanotevera. Matracer anoshanda chete muHL ane 9mm zvombo, pamwe nemamwe ma mods. Iko hakuna vatevedzeri muCS.
vgui_emulatemouse Izvi zvinoita kuti chitubu chembeva chitevedzerwe (izvi zvinogona kubatsira kune ekare makadhi emifananidzo anoratidza inopenya mbeva cursor kana pasina mbeva cursor zvachose).
vid_d3d Zvaiita sekuchinja pakati peOpenGL neD3D modes, asi sezvo zvinoda kutangazve mutambo, hazvishande. OpenGL inoiswa ku 0 uye D3D inoiswa ku 1. Inogadzirisa otomatiki kune vhidhiyo modhi yauri kana wajoinha sevha.
saizi yekutarisa Iyo inoseta saizi yemutambo wako skrini zvine hurongwa.
mhirizhonga_ropa Anochinja ropa remutorwa.
mhirizhonga_agibs Inoshandura gibs yemutorwa.
mhirizhonga_hblood Anochinja ropa remunhu.
mhirizhonga_hgibs Anochinja mabhende emunhu.
voice_enable Inopa kutaurirana kwezwi kuburikidza nemakrofoni.
voice_fadeouttime Huwandu hwemasekonzi izwi remutambi rinodzima kumagumo pavanotaura mumaikorofoni. Uku kuita kuti shanduko isvike painomira kutaura inzwi rakatsetseka. Isa izvi ku0 kana iwe uchida kuridza ruzha uchishandisa HLSS/HLDJ, sezvo izvi zvichiita kuti mimhanzi ipere uye inyarare mushure mekunge rwiyo rwarira ruchiridzwa.
voice_forcemicrecord Anoseta rekodhi kuWave Out Mix pachinzvimbo cheMutsetse 1/Mic. Iyo HL injini inoedza kuve nechokwadi chekuti musanganisi kudzora marongero akaiswa nemazvo uchitamba, asi haasi ese makadhi eruzha anoshanda zvakafanana, kunyanya akanyanya kumagumo. makadhi anonzwika akadai seAudigy 2ZS pro makadhi. Kana iwe uine nyaya nemaikorofoni isiri kushanda mushure mekutangisa mutambo, edza kuseta iyi ku0.
voice_inputfromfile Kana yakaiswa ku1 uye ukashandisa +voicerecord izvi hazvirekodhe inzwi rako asi zvicharidza WAV faira kubva ku cstrike/voice_input.wav yako.
voice_loopback Paunoibatidza wotaura mumaikorofoni yako, inoisa izwi rako wega kuti unzwe inzwi rako.
voice_recordtofile Rekodha izwi rako kune faira kana rakaiswa ku1 uye iwe unotaura mumakrofoni. Mafaira maviri: voice_decompressed.wav (haine audio chaiyo) uye voice_micdata.wav (unotaura).
voice_scale Izvi zvinotara kuti manzwi evamwe vatambi anozodaidzira sei kana vataura (zvakare izwi rako kana ukashandisa voice_loopback).
vhorumu Inoseta chiyero chevhoriyamu.
v_centermove Inoisa chinhambwe chekufamba kuenda kunzvimbo dzekutaridzika kana -mlook uye lookpring 1 iri kushanda.
v_centerspeed Iyo inosarudza kuti inokurumidza sei crosshair yako pakati pepakati pechidzitiro kana mbeva kubhurawuza kwakadzimwa (-mlook) uye lookpring 1.
v_rima Kuseta iyi parameter ku1 kunoita kuti nhanho ipere kuita dema pamutoro wekutanga.
mvura_type Sets the room_type pasi pemvura, ona room_type kune tsananguro yemhando. Gadzirisa ku 0 kune ruzha rwepasi pemvura rwakajeka.
zoom_sensitivity_ratio Inotsanangura sensitivity factor yekuyera.
_cl_autowepswitch Chinja otomatiki kuchombo chine simba kwazvo. (Kana yaiswa ku1, paunotenga chombo chitsva kana kumhanya pamusoro pacho kuti uinhore, icho chinongochinja kune icho chombo.) Kana yakaiswa ku 0, sarudzo yako yazvino chombo icharamba yakasarudzwa.
_snd_mixahead Inoseta nguva (mumasekondi) yekusanganisa odhiyo kusvika kure kumberi. Inofanira kushandiswa chete kune dzakaoma kuita nyaya. Kana ruzha rwako ruchisvetuka kana kuputika, ungangoda kuchinja izvi.
Tagscounter strike 1.6 murayiro counter strike 1.6 cvar list counter strike 1.6 cvar zvigadziriso list counter strike 1.6 download counter strike cvar list cs 1.6 murayiro cs 1.6 cvar list cs 1.6 cvar zvigadziriso list cs 1.6 download Hafu-Hupenyu mutambo cvar runyorwa kunatsiridza mhando counter strike 1.6
mirairo inobatsira uye yakakosha ye Counter-Strike 1.6